Farmaajo oo amray in la baaro ciddii weerartay hoyga Cabdi Qaybdiid – STAR FM SOMALIA
Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo), Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, ayaa amray in baaritaan deg deg ahi lagu sameeyo ciddii ka masuulka ahayd weerarka lagu qaaday hoyga Xildhibaan Cabdi Xasan Cawaale (Qaybdiid).
Xildhibaan Cabdi Qaybdiid oo ka tirsan Xildhibaanada Aqalka Sare ee Baarlamaanka Somaliya, ayaa la weeraray hoygiisa oo ku yaala Degmada Hodan, xilli uu Xildhibaanku ka maqnaa hoyga.
Ciidan ka tirsan kuwa Dowladda Somaliya, ayaa la sheegay inay ka masuul ahaayeen weerarkaasi, iyagoona argagax ku riday dadkii ku sugnaa guriga, oo ay ku jirto afada Xildhibaanka. Ciidanka ayaana baaritaano ku sameeyay qaybaha kala duwan ee gurigaasi.
War ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha oo lagu qoray barta Villa Somalia ku leedahay Twitter-ka, ayuu Madaxweynuhu ku amray Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka, General C/weli Jaamac Xuseen (Gorod) in la baaro ciddii ka dambeysay weerarkaasi.
Madaxweyne Farmaajo, ayaa General Gorod faray in baaris dhab ahi lagu sameeyo kuwii ka masuulka ahaa weerarkaasi, lana horkeeno cadaaladda.
Dhanka kale Wasiirka Warfaafinta Somaliya, C/raxmaan Cumar Cismaan (Yariisow), ayaa bartiisa Facebook ku qoray in Dowladda Somaliya ay baaritaano ku samayn doonto ciddii gaysatay weerarkaasi.
Cabdi Qaybdiid oo ah Gudoomiyaha Guddiga Dastuurka ee Labada Aqal ee Baarlamaanka Somaliya, ayaan wax badan laga ogayn cidda weerartay hoygiisa iyo weliba ujeedada ka dambeysa.
(DHAGAYSO) Saraakiil loo xiray werarkii guriga santor Cabadi Qaybdiid